DAAWO: Feysal Waraabe oo difaacay Boqor Buurmadow oo yiri “Al-Shabaab waa dowlad Dir hoggaamiso” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Feysal Waraabe oo difaacay Boqor Buurmadow oo yiri “Al-Shabaab waa dowlad Dir hoggaamiso”
November 30, 2021 Xuseen 10
Guddoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland Feysal Cali Waraabe, ayaa difaacay sheegashadii Boqor Buurmadow ee aheyd in Al-Shabaab ay yihiin Dowlad labaad oo ka dhisan koonfurta Soomaaliya, taas oo ay hoggaamiso beeshiisa (Dir).
Boqor Cismaan Buurmadow oo ka qeybgalayay xaflad ka dhacaysay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in Axmed Godane oo ahaa hoggaamiyaha kooxda Al-Shabaab, uu ahaa beeshooda, ayna ka xumaayeen dhimashadiisa.
Feysal Cali Waraabe oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin maanta la yiraahdo raalli-gelin ha bixiyo Boqor Cismaan Buurmadow, oo u gurmaday dadka Koonfureed.
“Waar ma ninka idiin soo gurmaday (Buur-madow) ayaad leedihiin Xaal bixi, maxaa Xaal looga bixin waayay markii uu Xasan Sheekh Aas-qaran u sameeyay Samatar oo na xasuuqay, markii Farmaajo isla sawiraray Tuke” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Kawarama iidoorow xasuuqa aad saacadan la joogo ka wadaan gobolka sool, buuhoodle iwm ??
Tigreega iyo SOMALILAYN waxay heshiis ku ahaayeen/yihiin in al-shabab ay xuran ka dhigtaan dhulkooda(SOMALILAYN) si aan businesska loosoo afjarin, waxyaabo badan baa fashilmaya sanadahan inasoo foodsaaray. Xaqoow feedha dilaac..
Biix, godane, buurmadaw waa hal cumlad oo labo weji leh…
Butcher of sool and buuhoodle ina kaahin and others waa qoloma??
– Isaaq waxay u jecel yihiin GODANE
Oo Soomaali xasuuqay
– Sida Mareexaan u jecel yahay dictaatoorkii SIYAAD
– Sida Ogaadeen u jecel yahay SAYIDKA
– Sida Majeerteen u jecel yahay INA YEEY
– Hawiyena u jecel yahay CAYDIID
Oo Soomaali badbaadiyey
ILAAHEY HA U NAXARIISTO DHAMAAN
Waxaa xaqiiqo ah, in aaysan maanta jirin cid qoowmiyadda Soomaalida ah ee Geeska Afrika ku dhaqan kaga khatar badan Iidoor, xitaa Axmaaro iyo Yahuudba ha noqotee!
Waayoo Axmaaro iyo Yahuud Afkaaga ma garanayaan oo kugu diirna maaha. Ee bal ka waran kan kugu diirka iyo Afka ah ee kuu qoslaya ee Feeylaha ku jiraaya adigoonba Darwen ka qabin!
Wixii uu uurka qabo afkaa xado!
Waxaa xaqiiqo ah, in aay Muqdisho magri iyo dhagari u joogaan, kuwa dowladnimadii Soomaaliya dhex fadhiya ee ka mishaar qaato, iyagoo Soomaali xagaal ahi iska dhigaya!
Waaba Doqonkii Farmaajo ah oo Agaasime Madaxtooyo Iidoor ka dhigtay!!!!!
Adigu isaaq ma adoo yar bay kufaraxumeeyeen ileyn waadigan ku walacay Iidoor, mise waxxaad tahay nijaastii Daquudkii Adeerkaa kadaba mashxaradayey oo futada xabada laga soo geliyey oo iyagoo kabahoodii Faqash faqashta hayaa kusoo yaacay tuulada Sharka gadhoowe,
Anaa ku idhi Alshabaab waa dowlad ka dhisan koonfur Dirna ka madax yahay Yaa fulay computreka dabadiisa sida naagaha kasoo caytama Doofaar doofaar dhalay oo Booli xaaraana lagu soo koriyey baa tahay fucking idiot,,
Waryaa xayawaan sida daarood u difaaco Daaquudkii adeerkaa iyo odeygii Geela masaakiinta ka boobi jirey xasuuqi jieyna kii ka horyimaada mabdaiisa Tuugnimads iyo dhaca iyo daaroodism Ina cabdule Hassan, cabdilaahi yuusuf oo amxaaro usoo kaxaystay inuu hawiye xasuuqo waa kuwaa kuwa idinka idiin halyeeyada ah somalida kalena u ah cadow Yahuuda ka daran oo axmaqiin ah,
Maxaa markaa diidaya in isaaq iyo hawiye halyeeyadooda sheegtaan marka aad adigu difaacayso Dhiigyacabyadii Taariikhda xun ka tegey oo somali badan galaaftay,
Somali waa la yaqaan kuwa boogta xun ku ah oo ah in dhulka laga nadiifiyo waayo waxaad rabtaan inaad weligiina dowlad ku dulnoolaataan oo weliba xagaldaaciisaan waxa koonfur ka degi weydeyn waa idinka iyo munaafaqadiina wasakhyahay,
Waxaan ka yaabanahay anshax xumada ay leeyahiin dadka u dooda soomaalilaan qaarkood.Waayo kii hadlaaba waxuu ka hadlayaa cayda Haweenka iyo wax isu taga.Sida Edbiye oo kale.War maad si kale u soo rayi dhiibataan?Maxaa idin ku imtixaanay cadya iyo galmada?
Hortà Hawiye ma caqliyeysto,barna uma korodho.
Al-shabaab waxay doontoba ha ahaateeee miyaanay ahayn xaqiiqo jirta oo a an indhaha laga qarsan Karin?
Midday kale ama ha ka ooyaan ama ha Ku farxaane Alshabaab miyaanay iyaguun ahayn oo dadkooda shaadhadh badan oo ay Ku dhacaan,Ku handadaan u toshay?
Alshabaab haddaanay dawlad ahayn maxay dadka u kala xukumaan,canshuurta Xamar uga qaadaan,afkiinaaba aad ka qirteene?
Alshabaab waa dawladda dhabta ah we meesha ka jirta qof kastaana og waxay doonto ha ahaatee,waana la arki maalinka Amisom baxdo sidii Afghanistan, oo maantaba Taliban ayaa ka dawlad ah.
Adeerkay Buurmadow wuu iska kaftamayey marku leeyahay DIR ayaa u talisa Alshabaab,waana waxba kama jiraan waana wada Hawiye,eelaay,Daarood siiba Mr,Og,Jareer,meelaha ay ka taliyaanna waa meelaha qabaailkaasi dego,HAWIYE AYAASE HAGA,SAMEEYAY HADAF KASTABA HA KA LAHAADO E AYNA UGU WEYN TAHAY IN XAMAR HABEEN IYO MAALINBA QARAX KA SOCDO IYAGOO KU FEKERAYA SOOMAALI BAA XAMAR MAR KALE KUSOO NOQON EE CABSIIYA,GURYAHA DAWLADEED,SHACABNA AAD SII XEJISATAAN.
Ina Godane wuxu ahaa nin dhexda u galay mooryaan,wantedna ka noqday dunida,mana haysan khiyaar kale,aakhirkiina waxa shirqoolay kuwa qaylinaya oo kuwo xarakada ah iyo kuwo dawlad Ku sheegta Ku jiray ayaa kala qaybsaday lacagtii USA madaxiisa saartay,waxana lagu shaabadeeyay hogaamiyaha Alshabaab oo aanu ahayn.
ALSHABAAB HADDAANU ANNAGU MAAMULNO,AANUNA CID KA AARSANAYNO MAANU CARRO DAAROOD KU SALLIDNO SIDA GEDO,GAROWE IWM?
Anigu wada mooryaan kaama dhigin,dadkaaga qarxina kuma odhan,xarakaduna waa wiilashiina Annagu waan iska kiin moosnay ee idinkamaanu nabad galneen.
Raalligelin yaa ka weydiiyay
1-Sheegashada qaran dhan oo ay 24 hrs afka Ku hayaan iyagoo ishaa leh,kana xishoon?
Jaalle Saalaxoow haddii ay madaxda iyo ganacsatada Hawiye rabaan nabad iyo Dowlad soomaaliyeed waa horay shabaab ciribtiri lahaayeen ee waysan rabin.
War Hawiye iyo Shabaab waa isku dad iyo isku rayi.Shabaabka la sheegaa waa wiilasha Hawiye iyo masaakiin yar-yar oo Raxanweeyn ah oo loo isticmaalo Qaraxyada.Tan kale marar badan bay Odayaal Hawiye ah sheegeen in aysan xamar uga baahnayn Dowlad.
Waxayna yiraahdeen sababtoo ah haddii ay xamar dowladi ka hir gasho waxaa xamar ku soo noqonaya Daarood.Daaroodna xamar way uga dhammaatay.Waa run oo Daarood xamar ka guur ugana dhammaatay ee maxuu Hawiye ugu heshiin waayey xamar oo ay har iyo habeen isu cunayaan?Isla markaas Madaxda Hawiye waxay 30 sano maamul u suubin la yahiin xamar kaliya.War nimanka xamar kaliya maamuli waayey oo an u diir naxayn shacabkooda masaakiintaa ee ay intaas dilayaan wiilashoodu ma waxay xukumi karaan soomaaliweeyn?Jawaabtu waa maya.Kama wado Hawiye oo dhan baa wada xun ama dambiile ah,laakiin nimanka qab-qablayaashaa weeye fidnoo dhan.
Buurmadow run ayuu sheegay. In xarunta ugu weyn ee shabaaab tahay burco waa lawada ogyahay oo shisheeye iyo sokeeyaba kama qarsoona. Oday buurmadow run ayuu sheegay oo xaal lama weydiin karo. Haweye makala jecla hadii dir xasuuqdo. Nabar gacal xanuun maleh. Waxaa hawiye u daran oo ay la barooran xagtin kasoo gaadha Daarood.
Fasal durwaa waxuu hawiye ula hadlayaa si ay yihiin wax ma garato caruur ah.